Ny Apple Watch dia afaka mamantatra ny vokatra maharitra amin'ny COVID-19 | Avy amin'ny mac aho
Ho an'ireo mpampiasa ny Apple Watch Tanora sy salama izy ireo, tsy tsapany fa manao fitaovana eo an-tànany izy ireo amin'ny fotoana rehetra afaka mamonjy ny ainy, na manampy azy ireo hisoroka aretina izay raha tsy misy ny famantaranandrony dia tsy hahita ny ratsy indrindra izy ireo.
Fikarohana ara-pitsaboana maro no manadihady raha mety manampy amin'ny famitana sy fiatrehana ireo vokatra maharitra niainan'ny Coronavirus. Ny fanampiana rehetra dia tsara, na kely aza.
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra COVID-19 dia nisy fanadihadiana vitsivitsy natao mba hamaritana raha afaka mahita famantarana sy soritr'aretin'ny COVID-19 ireo akanjo entina toa ny Apple Watch. Vaovao lahatsoratra navoaka androany tao amin'ny magazine JAMA Network Open Nasongadiny fa ny fitafiana azo ampiasaina toy ny Apple Watch sy Fitbit dia afaka manome data momba ny vokatra maharitra amin'ny COVID-19 ihany koa.
Ny data vaovao dia avy amin'ny andrana Digital Engagement and Tracking for Early Control and Treatment (DETECT) notarihin'ny mpahay siansa tao amin'ny Scripps Research Translational Institute any California. Ity fandinihana ity dia natao tamin'ny 25 martsa 2020 ka hatramin'ny 24 janoary 2021 ary nahitana mihoatra ny Olona 37.000 manao Fitbits, Apple Watches ary akanjo azo anaovana akanjo hafa. Ny fandinihana dia nateraky ny fampiharana fikarohana MyDataHelps.
Ny fiovan'ny angon-drakitra azo entina dia hita miharihary rehefa voan'ny aretina
Tamin'ny volana oktobra dia namoaka izy ireo fa ny fitambaran'ny angona avy amin'ny Apple Watch sy Fitbit miaraka amin'ireo soritr'aretina voalaza dia nanjary detection marina kokoa amin'ny tranga COVID-19, noho ny tranga voalaza fa tsy manana akanjo azo entina.
Ankehitriny, ny mpikaroka dia mandavaka ny angon-drakitra miaraka amin'ny fifantohana amin'ny Vokany maharitra an'ny COVID-19. Tamin'ny voalohany, ny mpikaroka dia nifantoka tamin'ny angona nomen'ny Wearables. Ny fiovana lehibe kokoa amin'ny tahan'ny fo fitsaharana dia voamarina ho an'ireo olona nanana Covid raha oharina amin'ny aretina virus hafa. Ny fiovana mazava ho azy dia hita ihany koa amin'ireo dingana natao isan'andro sy amin'ny torimaso.
Maromaro amin'ireo fanadihadiana ireo no mbola mitohy, mba hanandramana hanana fifandraisana mivantana eo anelanelan'ny angon-drakitra atolotry ny wearables amin'ireo olona voan'ny virus coronavirus sambatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Apple Watch dia afaka mamantatra ny vokatra maharitra amin'ny COVID-19
Philips dia manomana ny jirony mifanaraka aminy ho an'ny telovolana farany amin'ity taona ity